ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက်ဒူဘိုင်း 2019 မဟာဗျူဟာနှင့်သုတေသနအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ🥇
ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လျှောက်ရန် - ယူအေအီးရှိအလုပ်အကိုင်အတွက်မဟာဗျူဟာနှင့်သုတေသန
နိုဝင်ဘာလ 16, 2017
နိုဝင်ဘာလ 23, 2017
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်စကားပြောယေဘုယျအားဖြင့်အလုပျအတှကျ Apply ယူအေအီးအတွက်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်။ အလုပ်နေရာလွတ်ရှာဖွေဘို့ Times သတင်းစာ ဒူဘိုင်းအတွက် နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကာလအတွင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်တက္ကသိုလ်မှအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအသစ်တစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ထိုအခါနှင့်အတူဥပမာထဲမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည် ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ သို့မဟုတ်အငြိမ်းစားယူပြီးသည်အထိဒူဘိုင်းရှိ၎င်း၏အလုပ်များ။ ဒူဘိုင်းအသစ်နေရာလွတ်ကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက် ဤပစ္စုပ္ပန်နေ့ကမ်ဘာပျေါတှငျသငျသညျသစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်အတွက်။
နေသောအများပြည်သူလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥပမာတစ်ခုအဖြစ် ဒူဘိုင်းမှာအလုပ်ရှာနေ ငါတို့ကုမ္ပဏီကသူတို့ကိုအလုပ်အကိုင်ရရှိအောင်ကူညီဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ အများစု ဒူဘိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ရှာဖွေနေသူ, ဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ကောင်းသောအလုပ်လုပ်အတွေ့အကြုံနှင့်အမြန်ပြုပြင်ရေးဆွဲပြီးရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, သူတို့အတွက်အသစ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အလုပ်အကိုင်များနေရာချထားပေးနိုင်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ် သူတို့အလုပ်သစ်အခွင့်အလမ်းများရနိုင်ရှိရာဒူဘိုင်း 2019.
ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းပြချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်အကျိုးဆက် ဒူဘိုင်းတွင်မဆိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရရှိရန်ကူညီခြင်း။ တနည်းအားဖြင့်သင်တို့အတွက်ကြောင့်ငါတို့သည်သုတေသနနှင့်မဟာဗျူဟာများကြည့်ရှိနိုင်ပါသည် ပင်လယ်ကွေ့တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ နိုင်ငံပေါင်း။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကသင်၏အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်စဉ်းစားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲ။ ပေးထား ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသမျှသောဤအချက်များကိုကျွမ်းကျင်သူများ.
ဒါပေမယ့်ရေရှည်မှာသည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူအရပျ၌အကောင်းတစ်ဦးအောင်မြင်မှုများနှင့်တိုးတက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်မဟာဗျူဟာရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အတိအကျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာသင်ယူအေအီးအတွက်တိုးတက်မှုစေမည်, အသင်တန်း၏, အကောင်းဆုံးအသိပညာနှင့်သင်ရတဲ့လိမ့်မည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို။ တိုးတက်မှုကိုစီတန်းနှင့်နက်ရှိုင်းသောသုတေသန, နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထဲမှာ, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အစျေးကွက်.
ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ 2019 အတွက်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ အလွန်နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်ပေမယ်များအတွက်ပိုပြီးသမားရိုးကျနည်းလမ်းများနှင့်နည်းပရိယာယ်များအများဆုံး ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အဖွင့် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ဤအချက်များပေးသော, ပေါ်သယ်ဆောင်နှင့်လူကြိုက်များစစ်ဆေး ဒူဘိုင်းအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များ။ အဟောင်းကိုနည်းလမ်းတွေ၏နောက်ခံတွင်, ယူအေအီးအတွက်လက်ရှိအလုပ်အကိုင်များ လူကြိုက်များအတွက်အငွေ့ပျံလာတယ်။ ရှာတွေ့မှပိုရှည်လမ်းမရှိသော ရရှိနိုင်အလုပ်အကိုင်များ ဒူဘိုင်း မည်သည့်နိုင်ငံသားများအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့်ရှာဖွေနေကြသူ ရွေးချယ်မှုများငှားရမ်း သတင်းစာမှာ။ သို့မဟုတ်ပင်မိမိတို့၏အိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေနေ့ကကြော်ငြာတွေကိုရှာ။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ အလုပ်အကိုင်အဒူဘိုင်းအတွက်ကမ်းလှမ်း 98% တွင်အွန်လိုင်းယခုဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့၏ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်အများဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ ပိုပြီးဆန်းသစ်ဖြစ်လာစေရန်နှင့်ရှေ့ဆက်သူတို့ရဲ့အလုပ်နှင့်အလုပ်အကိုင်များကိုဖြားယောင်းအသစ်မဟာဗျူဟာကိုကိုင်တွယ်။
၏ရည်ရွယ်ချက် သငျသညျမှကူညီပေးနေ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီလူကြိုက်အများဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများကိုအကွံဉာဏျကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ ဤသည်ကိုမည်သို့ကတခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေ။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရတဲ့နည်းလမ်းသစ်တွေပြီးသားစော်ဘွားကူးလာကြ၏။ ဤရွေ့ကား, တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေနေမိုဘိုင်းဖုန်းအလုပ်အကိုင်။ သငျသညျယခုသင့် android ပေါ်မှာသင့်ရဲ့အိပ်မက်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေတာ. ဒူဘိုင်းစိတ်ဝိညာဉ်၏သရုပ်ဖော်ပုံအဖြစ် 300,000 ကျော်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှလာမယ့်ကျွမ်းကျင်သူများအမှုဆောင်အရာရှိ 500,000 မှတက်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားစေရန်, ထိုသူအပေါင်းတို့ချင် ဒူဘိုင်းအသစ်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေ။ မရတိုင်းကျွမ်းကျင်သူများတစ်ဦးကိုတွေ့လိမ့်မည်: ဒါပေမယ့်ကြောင်းပြောရန်ဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ သတိရဖို့ကပထမအရာ ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေနေအွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်များ ဒါကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်မည် 2019 ။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သင် headhunters မှလူကြီးမင်း၏ CV ကိုပေးပို့အများအပြားနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မှတ်ပုံတင်ရန်ရန်လိုအပ်ပါတယ် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အက်ဘ်ဆိုက်များ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ 2009 HR မန်နေဂျာများနှင့်အတူသုတေသနကွပ်မျက်ကတည်းက။ ထိုအခြေအနေများအောက်တွင်ကျနော်တို့လက်ခံရရှိအရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ် ကူညီခြင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူဒူဘိုင်းထဲတွင်နေရာခံရဖို့.
ထိုကိစ္စတွင်, သင်ရုံတစ် CV ကိုပေးပို့ဖို့နဲ့အဲဒီမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ထွက်ထားရန်3လအတွင်းဖြုန်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်နှင့် ရယူ အ အလုပ်ရှင်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှု အချိန် ယူ. 8 လအထိပါလိမ့်မယ်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သင်အမြဲလုပ်နိုင် ဒူဘိုင်းတွင်ဆုပ်ကိုင်ခေါ်ဆိုခစင်တာအလုပ်အကိုင်များ သို့မဟုတ်ပင် ဒူဘိုင်းရှိလက်လီအလုပ်အကိုင်များ သင်တစ် ဦး ကိုရှာဖွေသည့်အချိန်တွင် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အအိပ်မက်မက်.
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်တစ်ဘွဲ့သို့မဟုတ်မာစတာဒီဂရီအများဆုံးအဘို့လိုအပ်ပါသည် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ ၏ထို့အပြင်အများဆုံး အလုပ်ရှာဖွေသူများ ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အနည်းဆုံးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အတွေ့အကြုံ, သို့မဟုတ် 2-5 နှစ်ပေါင်း client-side ၏ 2-3 နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကိုဝတ်ပြုကြလော့။ နှင့် 1-3 နှစ်ပေါင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်း-side အတွေ့အကြုံ။ သင့်ရဲ့လက်မှတ်များမှအညီအမျှအရေးကြီးသောသငျသညျဗြာဒိတျရူပါရုံနှင့်အတူတာဝန်ရှိသည်နှင့်လူတစ်ဦးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် key ကိုအမှတ် ရာထူး ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်သေဒဏ်စီရင်အဘို့ဖြစ်၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျမြားကိုလညျးကုမ္ပဏီများမှငှားရမ်းကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက် Careerjet စုဆောင်းမှုအလုပ် site ကို နှင့် ပင်လယ်ကွေ့ကျွမ်းကျင်သူများငှားရမ်းများအတွက်ထိပ်တန်း rated ကုမ္ပဏီတခု။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်ထုံးစံအလုပ်ရှာဖွေသူပရိုဖိုင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အခါခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်ကျနော်တို့အစီရင်ခံမှတဆင့်စတင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုချင်းစီမှစီမံကိန်းအားသုတေသနပြု။ ထိုအသင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုအခုမှပဲဖို့လိုအပ်သောအရာကိုထောက်ပြ တစ် CV ကို upload တင်နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့.
ယေဘုယျအားဖြင့်စွမ်းရည် စီမံကိန်းများမှတဆင့်စီမံခန့်ခွဲရန် ဒူဘိုင်းဧရိယာကုမ္ပဏီများမှ.
ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏တာဝန်နှင့်အလုပ်အကိုင်အပြုမိဖို့မြင့်မားသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုအာမခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းခက်ခဲပင်လျှင်တာဝန်ကို၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအလေးပေးရန်။ သိသိသာသာမိုဘိုင်းဖုန်းဆက်သွယ်ရေး အင်္ဂလိပ်နှင့်အာရဗီကျွမ်းကျင်မှု.
ကျိန်းသေလက်ရှိ clients များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူအရေးကြီးသောစျေးကွက်တာဝန်များကိုထွက်ထောက်ပြတာပါ။ လုံလောက်အောင်အသိဉာဏ် Be အမ်းမရိတ်တွင်နေထိုင်သော၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရေရှည်မှာလျင်မြန်စွာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှ.
ယူအေအီးရှိအလုပ်အမှုဆောင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် qualification / လိုအပ်ချက်များ:
အင်္ဂလိပ်လိုခိုင်မာတဲ့အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပြီး client များနှင့်အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အစီရင်ခံစာတည်ဆောက်ခြင်းတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။
စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များလိုအပ်ပါတယ် တစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွေ့အကြုံ, ဥရောပ, အမေရိကန်, ကနေဒါ, အာရှ, နှင့်အတူစတင်။
ထိုအတောအတွင်းမှာလည်း သငျသညျအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သရုပ်ခွဲကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ဖို့လိုအပ် နှင့်ခိုင်ခံ့သောအရောင်းအတှေ့အကွုံ။
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, တိုင်း ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ အသေးစိတ် oriented, အသင်းကစားသမားဖြစ်, နှင့်မြင့်မားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ယူအေအီးအတွက်စီးပွားရေးနှင့်အချို့စီမံခန့်ခွဲမှုအတှေ့အကွုံနားလည်မှု အငယ်တန်းဝန်ထမ်းကိုစီမံခန့်ခွဲ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကုမ္ပဏီများမှ၌တည်၏။
ယူအေအီးအတွက်ကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်လုပ်နေသည့်အခါဝန်ထမ်းဘယ်လောက်လုပ်သလဲ ?. ယူအေအီးအတွက် 170 ကျော်ကုမ္ပဏီများမှဖြစ်ကြောင်းကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည် glassdoor.com အပေါ်မြင်နိုင်။ သင့်ရဲ့သုတေသနအတွက်နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်ရပါမည် ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များလစာ. သင်ပင်အင်တာဗျူးအဘို့အသွားရှေ့တော်၌ထိုအပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျစစျဆေးနိုငျသညျ။ ဥပမာ, အလုပ်ခေါင်းစဉ်ရွေးချယ်မှုလုပ်ဘို့ဝင်ငွေနိုငျန်ထမ်းများအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အဘယျသို့ဝင်ငွေကိုသင်အသိအမှတ်ပြုရန် ဒူဘိုင်းအတွက်တိကျသောအလုပ်ဧရိယာ.
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ Glassdoor ရဲ့ကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်းအတွက်လစာစာရင်းဇယားပြီးမြောက်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, သူတို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် 980 အပေါ်အခြေခံသည် ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီများ။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ကုမ္ပဏီယူအေအီးအတွက်လစာ၏အစီရင်ခံစာများကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ အထက်ပြထားတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းချုပ်ထဲမှာဆုကြေးငွေတစ်ဦးချင်းစီကုမ္ပဏီကပေးဆောင်သတင်းပို့ပါ။ ထိုအခါများတွင် နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအသေးစိတ်လုပ်ခလည်းပါဝင်သည်။ တောင်မှသူတို့ခြုံငုံဒူဘိုင်းဝန်ထမ်းနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်ချိန်နာရီလစာအစီရင်ခံစာများခွဲ။ တစ်ခုခုကိုကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအမည်ဝှက်သို့မဟုတ်န်ထမ်းများကတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းအတွက်တိကျသောကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်နေသူများက။ ဒီတော့တဲ့အခါ ဒူဘိုင်း်ထမ်းရှာဖွေသူ သငျသညျအရရှာနေကြဘူးမည်မျှသင့်ရဲ့အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းသင်မေးပါလိမ့်မယ် ?. ထိုခဏခြင်းတွင် Glassdoor ပေါ်တွင်သင်၏သုတေသနနှင့်အတူသင်မှားယွင်းတဲ့တည်မြဲလုပ်ခလစာတောင်းဆိုမှုကိုမပါဘဲခန့်မှန်းမှုနှင့်ထိုသူတို့အားပေးနိုငျသောအရေအတွက်ကိုသိကြပါလိမ့်မယ်။
Glassdoor - သင်ဒူဘိုင်းအတွက်မြျှောလငျ့နိုငျဘယ်လောက်အလုပ်အကိုင်များလစာစစ်ဆေး
ဒီတော့အတောအတွင်း ဒူဘိုင်းအတွက်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်အလုပ်အကိုင် 2019 ရှိနှင့်သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဥပမာ, ဒူဘိုင်းအတွက်ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်ပင်သွားဆရာဝန်အလုပ်အကိုင်အတွက်မော်တော်ယာဉ်အလုပ်အကိုင်များသင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စ သငျသညျအဘယျသို့အနေအထားကိုလျှောက်ထား သငျသညျအစည်းအဝေးများရင်ဆိုင်ဖို့မျက်နှာအဘို့ခဏပြင်ဆင် 100% ဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ သင်တို့အဘို့အတော်လေးနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာကြည့်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရုတ်တရက်အားလုံး ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ။ နက်ရှိုင်းစွာ, ကုမ္ပဏီရူပါရုံကိုသုတေသနရည်မှန်းချက်များနှင့်အတက် Sum မှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ကုမ္ပဏီ၏ပေး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အလွန်လူကြိုက်များအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်သုတေသနအိုင်တီဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အလွတ်ဖြစ်ပါတယ်။7စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုအစဉ်အမြဲကြောင့် အိန္ဒိယကနေအသစ်အကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဒူဘိုင်းပွင့်လင်းတံခါးများ.
များအတွက်နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၌တည်၏ ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ, သင် ... သင့်တယ် အလုပ်ရှင်များ၏အာရုံကိုဖမ်း။ တခါထဲထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့သင့်ပရိုဖိုင်းကိုပြင်ဆင်ပါနေသမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ် gulf အလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များ ဒူဘိုင်းတွင်လက်ရှိအလုပ်အဖွင့်ရှိခြင်း။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုအမှု၌, ကို double-စစ်ဆေးမှုများ ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များလစာ နှင့်လေ့လာသူကတခြား အလုပ်ရှာဖွေသူများပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ထို့ကြောင့်အကျိုးဆက်ရှာဖွေနေသူတို့အားအခြေအနေများအောက်တွင်အဘယ်အရာကိုကုမ္ပဏီကဆုံးဖြတ်ချက်ချသငျသညျခဉျြးကပျဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ ထိုအခါနောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်, ထိုကဲ့သို့သောသို့ရာတွင်ထောက်လှမ်းရေးအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသရုပ်ပြဖို့သူတို့ကိုဝင်တိုက်။ သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဌာနခွဲအကြောင်းကိုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူတွဲပြီးအထူးသနှင့်ဆက်ဆက်ကဏ္ဍအသိပညာ။ အတူတူသိသိသာသာယုံကြည်မှုနှင့်အတူ သူတို့အနာဂတ်မှာသင်အပါအဝင်သငျ့သညျရှိရာ.
ဒူဘိုင်း 2019 နှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှ Networking
မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ၏ထက်ပိုမိုထက်ဝက်ဖြစ်ပါတယ် အလုပ်ရာထူး ဝက်ဘ်ဆိုက်များငှားရမ်းဒူဘိုင်းအလုပ်အပေါ်ကြော်ငြာဘယ်တော့မှနေကြတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဒီမကြာခဏဝှက်ထားသောအလုပ်စျေးကွက်၏ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ပေးထားသည်။ ဤအရစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ယူအေအီးအတွက်ထိပ်တန်း LinkedIn စာမျက်နှာများကိုကျော်အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှု။ ထိုနညျးတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူရှာဖွေနေသူတံခါးဝ၌တစ်ဦးခြေကျင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုဒူဘိုင်းရှိအခြားအလုပ်ဆိုက်များမှကွဲပြားခြားနားသည်။
ထိုမှတပါး, တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ created သင်တစ်ဦးရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားရ HR မန်နေဂျာများနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်မည့်စနစ်တခု ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ။ သငျသညျကူညီပေးနေ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်။ အဘယ်သူမျှမလမ်းညွန်၌သင်တို့ကိုသိတယ်ဆိုရင်တောင်သင်က HR မန်နေဂျာများ, အကြီးတန်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့်ဒူဘိုင်းတွင်စီအီးအိုနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားစေရန်, ဒူဘိုင်း၏ဖွံ့ဖြိုးဆုံး စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများကျွမ်းကျင်မှုသင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာအလုပ်ဖွင့်ပွဲတစ်ခုကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည် Hays.ae ၏ HR ဒါရိုက်တာနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးသူနိုင်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသိရကြလိမ့်မည်တဲ့ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်သင်ကူညီ.
ဘို့ gulf အလုပ်အကိုင်များ, ကွန်ရက် LinkedIn နှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, လူတစ်ဦးနှင့်အခြားအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုတို့ကရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ join လို့ရပါတယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီများမှအသင်းအဖွဲ့များ စနစ်နှင့်သင်ကဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင် 2,000 ရှာဖွေစုဆောင်းကျော်နှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအထက်တွင်သရုပ်ဖော်ပုံအဖြစ်ထိပ်ဆုံးစုဆောင်းမှုပညာရှင်များနှင့်တကွသင် connect ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရင်ကရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း, ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ရရှိနိုင်သောကာတာနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည် ဒူဘိုင်းအတွက်စုဆောင်းမှုအလုပ်အကိုင်များ သင့်လယ်ကွင်းအတွင်းရှိ 2019 ။
ရေရှည်မှာများတွင်မြောက်မြားစွာအွန်လိုင်း tools များသည်လည်းသင်တို့ကိုကူညီတည်ရှိ ယူအေအီးအတွက်ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်ထိပ်တန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရ. နိဂုံးချုပ်မှာတော့ထိုကဲ့သို့သော LinkedIn တို့ကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာပေါ်တယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားကူညီပေးသည်။ အချိန်ကနေအချိန်စုဆောင်းဖို့ LinkedIn ကနေ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူကွန်ယက်အားခွင့်ပြုပေမယ့်မှသာဤကဲ့သို့သောစော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းအတွက်.
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်အလွတ်ဘို့ထားရှိရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ တစ်ခုခုကိုကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်နှင့်မာစတာဆက်သွယ်မှုစာရင်းသွင်း အလုပ်အကိုင်များ နိုင်ငံခြားသားများအဘို့အဒူဘိုင်း နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်နိုင်သမျှအလုပ်အဖွင့်။ အနှစ်ချုပ်ရန်သင့်အားအခြားအထူးကုတွေ့ဆုံရန်နိုင်ပြီး စုဆောင်းမှုကျွမ်းကျင်သူ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားလူမှုရေးမီဒီယာကွန်ရက်မှတဆင့် Facebook က or တွစ်တာ.
ဒါရိုက်တာ / န်ထမ်းခေါ်ယူမှု / HR မန်နေဂျာများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ
Whatsapp Group မှဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့
မကြာခဏသတိမမူ point အလုပ်ပေါ်တယ်က်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ဤကုမ္ပဏီများနှင့်အပြုသဘောဘက်ထွက်ထောက်ပြရန်။ ဒူဘိုင်းအတွက်ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းအလုပ်အကိုင်လုံးဝ ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်များ နေရာလွတ်များနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော ဒူဘိုင်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချိန်အလုပ်အကိုင်များ သငျသညျပြီးသားယူအေအီးအခြေစိုက်လျှင်။ သို့သော်အနုတ်လက္ခဏာဘက်ပေါ်တွင်သင်အိန္ဒိယထဲကနေလျှင်နှင့်ရှာနေ အိန္ဒိယများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ က hard ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအသင်ရုံဘွဲ့ရနေကြသည်သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံကိုအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ပိုလတ်ဆတ်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာနေစရာမလိုပါဘူးသော်လည်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရှည်လျားသည်သင်၏ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဆိတ်ကွယ်ရာကျလိမ့်မည် run ထဲမှာစကားပြော။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအထက်တွင်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒါ ပညာရှင်ပီသစွာ MBA ဘွဲ့နှင့်အတူအများအပြားအလုပ်အကိုင်များကိုတည်ထောင်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းကိုစတင်စဉ်းစားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ယူ. နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်ဖြစ်ပါတယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေ.
ထို့အပွငျ, လူကြိုက်အများဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေရာများ များမှာ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များ ယူအေအီးရှိ Emirates NBD နှင့် HSBC Bank တို့ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းရှိတရားဝင်အလုပ်များနှင့်အတူရှေ့နေအလုပ်အကိုင်များကိုဖော်ပြခြင်းမပြုရန်။ နှင့် Rak ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီဘယ်မှာထိပ်တန်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ဒူဘိုင်းအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်အကိုင်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီများမှ။ ရန် CV ကို / ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ခြင်းယူအေအီးအခြေစိုက်စခန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူဤအချက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူပေးထား ယူအေအီးအတွက်စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်.
ယူအေအီးဂျော့ဘ်များအတွက် WhatsApp ကို Group မှ join
WhatsApp ကို နှောင့်နှေးလုပ်နိုင်တဲ့မပါဘဲ Messenger ကို အရသင်ကူညီ ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်။ ခဏ၌သငျစုဆောင်းမှုအေးဂျင့်မှပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ပင်အနည်းငယ်အတွင်းသင်၏ CV post ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်း WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ။ အခါအားလျော်စွာ HR မန်နေဂျာများနှင့်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီမှလူသစ်စုဆောင်းသူများကိုငှားရမ်းပြီးဒူဘိုင်းတွင်ဒေတာ ၀ င်ရောက်မှုအလုပ်အကိုင်များကိုတင်သည်။ လက်ရှိအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းရှိ 10 Whatsapp မိုဘိုင်းအုပ်စုများကိုဝိုင်းရံထားသည်။ ထို့ကြောင့် 50,000 အလုပ်ရှာသူများနှင့်တွေ့ပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ ယခုအချိန်အထိချက်ချင်းရောက်နေကြပါစို့ နိုင်ငံတကာအလုပ်များ ဒူဘိုင်းတွင် 2019 ၌သာကျွန်ုပ်တို့၏သုံးနိုင်သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း WhatsApp ကိုအုပျစု.
ယူအေအီးအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတွင်လည်းအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်ဖြင့် Dubai City Company သည် ငါတို့နှင့်ပူးပေါင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ပါ ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပျစု။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းသည် 100% အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်လုပ်ရန်မလိုပါ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း upload နှင့် အကောင်းဆုံးကိုရှာပါ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ Expat jobs. တဦးတည်းကလစ်တွေအများကြီးနှင့်သင့်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းယောဘအေဂျင်စီများ, နိဂုံးချုပ်အတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရှာဖွေနေ။ အတူစတင်, နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ 2015 ကတည်းကကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းသတင်းပို့ပါ။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, အင်တာနက်အမြင်များ၏ 75% ဗီဒီယို၏ဖွဲ့စည်းပုံ၌ရှိ၏။ ခဏဗီဒီယိုထဲမှာ CV ကိုပု 85 ကုန်စည်ပြပွဲအားဖြင့် 2020% အထိတိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ် အစိုးရ VACANCY များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်။ ကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်ရှေ့ဆက်-စဉ်းစားစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကျယ်ပြန်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု.
ထိထိရောက်ရောက်လူပေါင်းကောင်းသောမီဒီယာကိုဖြတ်ပြီး shared နိုင် Sharp ကတိုတောင်း Youtube ကိုကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း။ အတူစတင်, ဗီဒီယိုကိုအလုပ်ရှာဖွေမှုများကို အဆိုပါ youtube ကကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဗီဒီယိုဖန်တီးမှုများသောအားဖြင့်ရှည်လျားစက္ကန့် 30 မှ 90 န်းကျင်ကြာပါတယ်။ သငျသညျနောကျလိုကျဖို့လိုအပျကွောငျးနောက်ထပ် key ကိုအမှတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ရုပ်ပြဖြစ်ပါတယ် တစ်ဘို့ တိုက်ရိုက်အလုပ်ရှင်။ သင်တို့သည်လည်းသင်သည်သူတို့၏ရူပါရုံကိုအတူသင့်လျော်သောကုမ္ပဏီကိုကူညီနိုင်ပုံကိုသရုပ်ပြနိုင်ပါလိမ့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားအောင်ပြီးမြောက်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလယ်ပြင်၌တစ်နည်းအောင်မြင်မှုအတွက်ကူညီပေးသည်။
အလုပ်ရှာဖွေသူများအများစုရှိရာစတင်သိကျွမ်းမဖော်ပြဘူး။ သင်တို့အဘို့အရှာနေနေတယ်ဆိုရင် ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ အမေရိကန်များအတွက် သငျသညျ Jobma.com စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ကြောင်းမှအညီအမျှအရေးကြီးသောလက်ျာအကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာနဲ့ start ရန်ဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးအတွက်ငှားရမ်းမန်နေဂျာ။ ဒီ General မှအတွင်းကုမ္ပဏီအတွင်း၌ HR မန်နေဂျာများနှင့်ပြင်ပငှားရမ်းအကြံပေးကိုတောင်းစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့သင်ထားကူညီပေးပါမည်။ ထိုကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အတူတက်အတိုင်းလိုက်နာ ကုမ္ပဏီ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သင့်အနာဂတ်အလုပ်ရှင်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ရုပ်ရှင်သည်.
အခြိနျမှနျမှ gulf နိုင်ငံများတွင်အလုပ်အကိုင်များကိုစူပါချက်ချင်းဖြစ်ပျက်။ ရှာဖွေစုဆောင်းအကြံပေး Youtube ကိုကိုယ်ရေးရာဇဝင်သွားရောက်လည်ပတ်အထူးသဖြင့်အခါ။ ထို့အပွငျ မန်နေဂျာများငှားရမ်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်ရရှိနိုင်ရာထူးဆွေးနွေးပါ။ Correspondingly အဆိုပါလမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးစာအုပ်ဆိုင် သူတို့နှင့်အတူနှင့်တစ်ဦးအနေဖြင့်အပြီး, လက်ရှိဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကမ်းလှမ်း ဒူဘိုင်းအလုပ် အခန်းအလွတ်။ ဒူဘိုင်းပွင့်လင်း ထောက်ခံစာအလွန်အမင်းအလုပ်ရှင်များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်အတှေ့အကွုံမြားအတွက်တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။
ဗီဒီယိုနေဆဲနီးပါးဖြစ်ပါသည် အသစ် option ကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအမဲလိုက် ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်။ ဒါပေမယ့်ရေရှည်မှာအတွက်အဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများကိုအဖြစ်ချလွန်စေနိုင်သည်။ အဲဒီအစားရှည်လျားပုံစံများအတ္ထုပ္ပတ္တိတစ်ခုဆောက်လုပ်ရေး, ဖော်ပြချက် Youtube ကိုရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုအသုံးပြုပါ။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, သင်သည်အတိတ်ကာလစီမံခန့်ခွဲပြီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတာဝန်ဝတ္တရား၏လက်တွေ့ကျကျရှုမြင်သည်။ ဒေသခံထံမှအရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတွေ့အကြုံလျှောက်ထားအထက်တွင်ပြထားတဲ့အတိုင်း ဒူဘိုင်းရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစျေးကွက် ပိုပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းမှဆွဲဆောင်နေကြတယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ.
ပင်ရိုးရှင်းသော Youtube ကိုဗီဒီယိုကကိုယ်ရေးရာဇဝင်အောင်ဤအချက်များပေးတော်မူ၏။ ကျိန်းသေ ပို. သူတို့ကိုကူညီလိမ့်မယ် လက်ျာဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအတွင်းရာထူးဆက်လက်ရှိ။ တချို့ကရှာဖွေစုဆောင်းထားပြီးမြှင့်တင်ရေးကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရုပ်ရှင်၏ကျော်ကြားမှုကိုလက်ခံခြင်း။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်, prerecorded ချက်တင် applications များကိုလည်းအဘို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို-and ဖွဆှေးနှေးထိပ်တိုက်တွေ့ရာပူဇော်သက္ကာကို တရားဝင်အင်တာဗျူးများသို့ရဖို့လမ်း။ မျက်နှာကို-to-မျက်နှာအပြန်အလှန်အနှစ်ချုပ်ရန်, ရေရှည်မှာအတွက်ရပ်ရွာနှင့်အတူလျှောက်ထား '' ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးပွားစေပါသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်, ဆက်ဆက်အများအပြား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ အကောင်းဆုံးကိုအလုပ်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အခြားကြိုးစားခဲ့ကြ အွန်လိုင်းအလုပ်တွင်ကျယ်စွာ။ ထိုမှတပါး, ကွဲပြားခြားနားကြောင့်ထားရန်, သတင်းစာများမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်ရတယ်။ အလင်းတော်၌ ဒူဘိုင်းအတွက်ခရီးသွားယာဉ်မောင်း။ သို့သော်ရည်ညွှန်းအပြန်အလှန်သင်ဒူဘိုင်းအတွက်မဆိုအခန်းအလွတ်ရနိုင်။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်, အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုအများစုသင်သွယ်ဝိုက်ကိုသိတစ်ဦးချင်းစီမှလာကြ၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီအစီအစဉ်ဖြစ်စဉ်ကိုဖိတ်ကြားချက်ကိုအားပေးမှုများအတွက်သင်ရရှိလိမ့်မည်။ ရည်ညွှန်းအကူအညီများတစ်ဦးအတွက်မလျှောက်ထားမှုနှင့်အတူ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီအလုပ်အကိုင်များ အနေအထားယုံကြည်မှုနှင့်အတူသင်၌အားကြီးသောအစွန်းပေးသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သငျသညျက de facto မပါဘဲဒူဘိုင်းအတွက်မဆိုအခန်းအလွတ်ရှိနိုင်ပါသည် ယူအေအီးအတွက်ထူးခြားတဲ့အလုပ်အကိုင်အလွတ်ရှာဖွေနေ.
ဤအချက်များ, ထိုအများစုပေးထား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေသူယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှိချင်။ အနှစ်သာရများတွင်တိုင်းကျွမ်းကျင်သူများကောင်းသောကုမ္ပဏီများနှင့်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ပညာရေးကိုသုံးပါနှင့်တကယ်တော့ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အတူအလေ့အကျင့်အခွက်တဆယ်နှင့်အတွေ့အကြုံကိုသုံးနိုင်သည်ဘယ်မှာ။ ရည်ညွှန်းနေဆဲအကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့. ဒူဘိုင်းအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ရည်ညွှန်းသုံးစွဲဖို့သူတို့အခွအေနမြေိုးသင်ဆဲကောင်းတစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်တော့သင်ကအလွန်အမင်းစိတ်ဝင်စားကိုယ်စားလှယ်လောင်းနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့မူကားတစ်ဦးအထောက်အကူပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်မိသားစုတစ်ခုသို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မှုအနေအထားကိုသူကောင်းကောင်း positioned မိတ်ဆွေများကိုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလုပ်စတင်နိုင်ရန်။
အလုပ်ရှင်အများစုကသူတို့လုပ်သားတွေကိုရန်မက်လုံးပေးကမ်းလှမ်းရန်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သူတို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအောင်မြင်သောဆက်ခံရည်ညွှန်းလျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသူတို့သည်သင့်ကိုငှားရမ်းလျှင်တစ်ဦး Win-Win အခြေအနေ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများအတွက်။ ရေရှည်မှာခုနှစ်, သငျသညျ တစ်ဦး Automotive အတွင်းဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အနေရာချထားရ စော်ဘွားအတွက်ဈေးကွက်။ နှင့်သင့် connection ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသို့မဟုတ်ပင်ထိပ်တန်းထစ်အလုပ်သမားအားထုတ်များအတွက် Finder ရဲ့ဆုလာဘ်ရရှိသွားတဲ့။
ဒူဘိုင်း 2019 ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အလုပ်ရှာဖွေရေး Website များယောဘ
ယောဘသည်ပျဉ်ပြားအစဉ်အလာထဲမှာဆက်လက်ရှိ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေသဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အရှာဖွေရေး. အလုပ်ရှာဖွေရေးက်ဘ်ဆိုက်များ တက်ဒူဘိုင်းအတွက်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကြော်ငြာအလုပ်အကိုင်များရန်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အတောအတွင်းအလုပ်သစ်နေရာလွတ်ပို့စ်တင်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအပြေး နေရာပြောင်းရွှေ့စုဆောင်းမှုအခွင့်အလမ်းများကိုန်ဆောင်မှုများအတွက်။ ၏တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အချို့သော အလုပ်အကိုင်အပျဉ်ပြား နေဆဲစှဲထားတဲ့သာမန်သဘောအရတည်ရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်လက်ရှိအချိန်တွင် 98% ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်ပျဉ်ပြား လက်ပေါ်ကို virtual လူမှုမီဒီယာ format ကိုရယူပါ။ အကြား ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 များအတွက်ယူအေအီးနေရာလွတ်အလုပ်အကိုင်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပျဉ်ပြားနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက်များဒူဘိုင်းကသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမ်းမရိတ်အတွက်မြို့တမြို့သို့မသာရှိသေး၏နောက်ခံမှာတော့ရှာဖွေကြိုးစားကြ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများနှင့် ဒူဘိုင်းအတွက်လမ်းညွှန်.
အကျိုးဆက်မှန်မှန်ဆက်စပ်အစိုးရကုမ္ပဏီများကအလုပ်ပျဉ်ပြားများကို ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ငှားရမ်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအလုပ်အကိုင်များကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ထိုအရပ်မှပေးထားပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျဒါ့အပြင်အလုပ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်အပေါ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်မဆိုအခန်းအလွတ်ရှာတှေ့နိုငျ။ အားလုံးအွန်လိုင်းကွန်ရက်များအထက်, ငါတို့သည်လည်းအလုပ်အကိုင်အဖွင့်ပို့စ်တင်ကြောင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း-related World Wide Web directory များ၏ကြီးမားစာရင်းဇယားရှိသည်။ ဥပမာ, ဒူဘိုင်းရှိလေကြောင်းလိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ဒူဘိုင်းလေဆိပ်ပို့စ် သို့မဟုတ် Fiverr.com ရှိရာအရပ်၌သင်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလွတ်တန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာအလုပ်အကိုင်များရရှိနိုင်သည်။
ယူအေအီးအတွက်ဒူဘိုင်းအကောင်းဆုံးယောဘသည် Portal - အမြဲပိုပြီးထွက်ရှာတွေ့
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအလုပ်ရှာမည် ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများအကြားအရပ်ဌာနတာနေကြသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ကျနော်တို့နှင့်အတူအကူအညီပေး အကောင်းဆုံးစော်ဘွားကုမ္ပဏီများမှ ထိုကဲ့သို့သော Monster.com, တကယ်တော့, Bayt.com သို့မဟုတ် CareerBuilder.com အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်။ ကိုယျ့ကိုယျကိုမှအလွန်ဆင်တူ၌အကြှနျုပျတို့၏မိတ်ဖက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူနောက်ထပ် key ကိုအမှတ်။ သူတို့ကအစတကယ်တော့ကျွမ်းကျင်သူများကူညီ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရ။ ကျနော်တို့ကယူအေအီးအတွက်ပေးသောငါတို့အလုပ်ရှာဖွေနေန်ဆောင်မှုများရှင်းလင်းရန်အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုတဦးတည်းဖြစ်၏။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင်ဟောင်းလမ်းသုံးပြီးရိုးရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေးဆိတ်ကွယ်ရာလဲကြလိမ့်မည်ဟုအထဲကရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သို့သော်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တို့သည်လည်းသင်လုပ်နိုင်သည်န်ဆောင်မှုများရှာဖွေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုအသုံးပြုဖို့အဖြစ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ get ဆော်ဒီအာရေဗျ။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင် ကာတာနိုင်ငံအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ ကိုရှာဖွေအများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်ကြသည်။ ကာတာနိုင်ငံအတွက်အဖြစ်မှန်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများနှင့်အလုပ်အကိုင်ပျဉ်ပြားခုနှစ်တွင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားမရတဲ့ကာလတစ်အများကြီးပိုမြန် turnaround အချိန်ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်အကိုင်များထက်ရုံယူအေအီးရှာဖွေနေစကားပြော။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ အားလုံး 2019 နှင့် 202 အတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကျော်0 ။ စုဆောင်းမှုပျဉ်ပြားတစ်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ပရိသတ်ကိုရှာဖွေရန်သင့်အားပေးသနားခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်အလုပ်ရှင်များ ကြီးမားတဲ့အကွာအဝေးကျော်။
နိုင်ငံတကာကစားသမားဘချိန်းဝိုင်းမကြာခဏတိကျတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအဆိုပြုထားပါသည်။ ဒါပေမယ့်မဖော်ပြ ဒူဘိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ဝိုင်း သူတို့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောများမှာ ဒူဘိုင်းဒေသခံအလုပ်ဈေးကွက်ထဲကနေ။ အကောင်းဆုံးကိုတဦးတည်းဘယ်မှာ Careers ယူအေအီးဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအသစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဦးတည်ချက်အမဲ။ ဤရွေ့ကားအလုပ်အကိုင်ဝိုင်းအမြဲအချို့အလုပ်ရှင်များနှင့်အတူဒွန်တွဲနေကြသည်သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစုဆောင်းမှုအေးဂျင့်.
ယူအေအီးကနေနိုင်ငံသားများကူညီပေးနေဒါကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းချိန်းသောအရပ်တို့ကိုမ။ လန်ဒန်အသစ်အလုပ်အကိုင်များစတင်ရန်, ထိုမှတပါးသြစတြေးလျအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ရှာမဖော်ပြ အမြိုးသမီးအကြိုက်ဆုံးကျွမ်းကျင်သူများနေရာများထဲကတစ်ခု နယူးဇီလန်အလုပ်အကိုင်များ။ နှင့်ရံဖန်ရံခါကျွမ်းကျင်သူများကနေဒါအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အချိန်ကိုကောင်းစွာ-အတွေ့အကြုံရှိအမှုဆောင်အရာရှိကိုလည်းရှာဖွေနေ ဒူဘိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ။ သိသာထင်ရှားတဲ့မဟုတ်လုပ်ခလစာများအတွက်ပေမယ့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ။ ဤအကြောင်းကြောင့်, အစိုးရအထူးစီးပွားဖြစ်ကြေညာချက်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
မည်သည့်ဖြစ်ရပ်အလုပ်များတွင်ဝိုင်းအဆက်မပြတ်ဒူဘိုင်းနိုင်ငံတကာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဝိုင်းများအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လတံ့သောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများစာရင်းကိုနှင့်အတူဆီသို့ရွှေ့မည်။ ဤအချက်များပေးထား, သင်တို့အဘို့ရှာကြသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကိုဒူဘိုင်း သင်စိတ်ဝင်စားသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီကိုလေ့လာသင့်သည် Sharjah ရှိအလုပ်များ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၌လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကိုယူဆောင်လာသင့်သည်။ ဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ကိုယ့်အတွက်ရောင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါစေ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီ။ သင်တို့အဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပေးချက်များများမှာ ဒူဘိုင်းတွင်အိုင်တီအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ နိုင်ငံခြားသားများအတွက်s ကို - တစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အဤအမျိုးအစားရဖို့လွယ်ကူသည်။ အကြောင်းမူကား,
သငျသညျအဲဒီမှာ go သည့်အခါကြိုးစားပြီး ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတစ်ဦးယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေဘို့စဉ်းစားကြ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးကိုသင်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူပြောဆိုမှုများစတင်ရန်သကဲ့သို့သင်တို့အင်တာဗျူး၏လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ရိုးရှင်းသောဆွေးနွေးချက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးက mini ကိုအင်တာဗျူး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီသည် ဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကအလုပ်စုဆောင်းမှုအေးဂျင့် သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အောင်မြင်မှုများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်နေ့၌သင်ချဉ်းကပ်။ ထိုအမှုကြောင့်အချိန်ရှိအခြားလျှောက်ထားသူအထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်း 2019 နှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့သင့်ကိုရိုက်ပုတ်နေတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိသည်မဟုတ်ပေမည်။
နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်နိုင်ငံစုံလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် may ပင် သင်တို့အဘို့အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဆိုပြုကြိုးစား။ သို့မဟုတ်ဤအမှု၌, သူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုက်ညီမယ့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်သင်နှင့်အတူ On-site ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ကျနော်တို့ 2016 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအပေါ်စင်္ကာပူရှိအခွားသူမြားဂျော့ဘ်ရန်တူညီအိုမန်အဆိုပြုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလကျခံသူအနည်းငယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးကိုသိရ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အတရားမျှတတဲ့.
Careers ဒူဘိုင်းအတွက်ယူအေအီးနိုင်ငံကယောဘပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ sign up ပြုလုပ်ပါ
အတူတူ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူသငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်ရှင်အဘို့သင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံရှိနိုင်ပါသည်။ ကစီမံခန့်ခွဲ တစ်ဦး Philipino အဖြစ်အလုပ်ရရန်ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီ နှင့်အလားတူအခြားကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကုမ္ပဏီများငှားရမ်းများစာရင်းကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ထောက်ပြမှအဘယ်ကြောင့်အထိဖြောင့်မသွား။ ပြီးတော့ အလုပ်အခွင့်အလမ်းဒူဘိုင်းများအတွက်သီးခြားစွာလျှောက်ထား သူတို့ရဲ့ website ကနေအလုပ်ရှင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပိုင်း ?. သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းတက်၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်အပိုင်းတွင်အဖွင့်အဘို့အလိုလျှင်, ဒီအကြောင်းပြချက်သည်။ သောသင်ပါလိမ့်မယ်မမျှော်လင့်တဲ့ option ကိုရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာ။ တူညီသောလက္ခဏာသက်သေခြင်းအားဖြင့်, သင်တို့အဘို့အသင့်အနေအထားရောက်ခဲ့ဖူးသောဧရာမအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။ အဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုပင်ဆော်ဒီအလုပ်အကိုင်များရနိုင်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပြောင်းရွှေ့ခံရသိတယ် ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ.
လုံးဝကျွန်တော်တို့ရဲ့အနှစ်ချုပ်ရန် ပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ။ ယူအေအီးအတွက်တိုက်ရိုက်အလုပ်ရှင်များများစာရင်းကို Created ။ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အစတင်ရန်ချင်ပါတယ်ကြောင်းအလို့ငှာ။ နှင့်ယူအေအီးအသစ်အနေအထားကိုဖုံးအုပ်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတှေ့အကွုံကိုသုံးပါရန်။ အနည်းငယ်ကုမ္ပဏီများသည်ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်အရပ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်အကိုင်များလုံးဝသင်ကျိန်းသေကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အအသုံးဝင်သောတစ်ခုခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်၎င်း၏အလုပ်အကိုင်များဘို့ရှိပါတယ်။
သင်ရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာဘို့တောင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအလုပ်လုပ်အပေါ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်အဖြစ်လုံးဝသေချာတယ်ဆိုရင် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆုံးမဩဝါဒပေး။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အနာဂတ်အလားအလာအချို့ကိုယူပြီးသင်၏တစ်သက်တာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်ကိုက်ညီသောသာတူညီမျှသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအခွင့်အလမ်းကိုရှာပါ။ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်၌ဇိမ်ခံပစ္စည်းမရှိသောကြောင့်သင်သိရန်လိုအပ်သည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့ ငွေတောင်းခံရန်အလုံအလောက်အလည်အပတ်ခရီးဗီဇာအပေါ်။ ခဏတာမှာသင်သည်သင်၏စာရင်းရှိကုမ္ပဏီအားလုံးအတွက်လျှောက်ထားသင့်သည်။ အားလုံးရုတ်တရက်ပေမယ့်ဒီအရည်အချင်းမပြည့်မီ၏သင့်လျော်သောဖြစ်လိမ့်မယ် တစ်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများအတွက် အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့။ အဆိုပါအချိန်တန်အတွင်းအသစ်ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကိုရှာဖွေလာသောအခါ ထိပ်ဆုံး rated ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီများ.
လျှောက်လွှာပေးပို့သည် - ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အေး Calling မှ
နောက်ဆုံးတော့ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းပို့စ်တင်အလုပ်သွင်းစဉ်းစားထဲမှာအအေးခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ရောက်ရှိပါပြီ။ ဒါကြောင့်အချိန်, ငါတို့သည်သင်တို့ထင်ရကြောင်းယူဆနေကြသည် စာရင်းအလုပ်တစ်ခုအတွက်စိတ်ဝင်စား။ သို့သော်ဤအခွင့်အလမ်းဘောငျထဲကဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာ, ဒီအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုဒူဘိုင်းအတွက်ချက်ချင်းကုမ္ပဏီထံမှ posted ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, သငျသညျလစာနစ်နာကြေးနှင့်အတူအထူးသဘောကျကြသည်။ ထိုအသင်ဤစူပါချဲ့ထွင်ရန်ချင်ပါတယ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကွံဉာဏျ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သငျသညျစံဒူဘိုင်းအွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်များလွတ်ထံမှကွဲပြားခြားနားသော start ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်, အကြံပေးအောက်မှာအအေးမိခေါ်ဆိုခယူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ချိတ်ဆက်မှုကွန်ယက်အဖြစ်ဤအသင်းအဖွဲ့အသိအမှတ်ပြုရန်စေခြင်းငှါ, အရှေ့အလယ်ပိုင်းညာဘက်ရွေးချယ်မှုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနှင့်အတူတွဲပြီး.
နောက်ဆုံးတော့ဒီအရာရှိတဦးကရတဲ့၏ရည်ရွယ်ချက် 2019 -2020 အတွက် WhatsApp ကိုအပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး။ ယေဘုယျအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏အသုံးဝင်မှု၏သေချာဖြစ်ရန်အတွက်တယ်လီဖုန်းအရောင်းကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရန်စတင်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဥပမာသင်ကယူအေအီးအတွက်ဘွဲ့ကြိုအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနေကြသည်လျှင်။ သငျသညျရှိရာအရပ်၌သင်တို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းတစ်ဦးချင်းစီကိုဆက်သွယ်အများကြီးသာအီးမေးလ်ကိုမလိုအပ်ပါဘူး သင်၏ CV ပို့ပေးပါ။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင့်လျော်သောအဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ရှာဖွေတာ အကြီးတန်းမန်နေဂျာတခါတရံလက်ထက်ပုံပြင်ဖြစ်လာကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်က google website အတွက်တူး: ဖော်ပြဒူဘိုင်းအလုပ်လစ်လပ်သောနေရာသို့မဟုတ်အထက်လက်ကိုညွှန်ပြအနည်းဆုံးဧညျ့ကွိုနှင့်အတူမေးမြန်းဆွေးနွေးချက်ဖို့ကြိုးစားနေ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု.
ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်ဂျော့ - အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီအသုံးပြုသနည်း
ကြားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှသော့ချက်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသော တိုက်ရိုက်တစ်ဦးချင်းစီငှားရမ်းအဆက်အသွယ်။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ငှားရမ်းမန်နေဂျာသင်တို့အဘို့အအံ့သြစရာလာမည့်နေရာလွတ်ရှိစေခြင်းငှါမအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်များပေးထားတစ်တွဲအမြဲယုံကြည်မှုနှင့်ဖြစ် သင့်ရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita ၏မိတ္တူ နှင့်ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ။ သင်ပို့အီးမေးလ်များကိုတရားဝင်လျှင်လိုအပ်သောအလုပ်ရှင်များ၏အချို့။
သင်တို့သည်လည်းအမျိုးအစားများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တောင်းနိုင်ပါတယ် ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ရွေ့လျား, ဒါမှမဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်အရည်အသွေးတွေဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုယ်စားလှယ်လောင်းအတွက်လှပါတယ်။ အဆက်အသွယ်ဒီလိုမျိုးအမြဲကောင်းစွာလက်ခံရရှိခဲ့သောမကျမည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်သူကလာမည့်နေရာလွတ်ပေါ်တွင်သင်အတွင်းပိုင်းလမ်းကြောင်းပေးလိမ့်မယ်တဲ့အခွင့်အလမ်းကအမြဲတမ်းရှိကွောငျးစိတျထဲတှငျထားပါ။
ပထမဦးဆုံးအရာအရပျ၌, အချို့ကိုသင်စဉ်းစားသင့် သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေးအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီ။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ, ဦးခေါင်း-မုဆိုးနှင့်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှသံသယမရှိသင်တစ်ဦးလက်ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ပွိုင့်ကိုမကြာခဏသတိမမူများမှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အကွံဉာဏျမြား၏အလုပ်အကိုင်အတွင်ကျယ်စွာ-bits။ ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလိကစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများအချို့ကပရီမီယံကြေးနှင့်အတူမဝင်စေခြင်းငှါအခြားသောလမ်းထားရန်။ သို့သော်အပြုသဘောဘက်ရှာဖွေစုဆောင်းအပေါ်အမြဲတမ်းပရိုဖိုင်းကိုဖန်တီးတစ်ခုချင်းစီ၏တန်ဖိုးကိုခန့်မှန်း ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူ။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload တင်လို့ရပါတယ်ဘယ်မှာအများအပြားကိုယ်စားပြုမှုမန်နေဂျာနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများရှိပါသည်။
သငျသညျတိကျသောသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတှေ့အကွုံမြားနှငျ့ငှားရမ်းစုဆောင်းဖို့လက်ရှိတန်ဖိုးဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြုပါရန်အလို့ငှာဖြစ်သည်။ စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများမှတဆင့်ငှားရမ်းထားခံရဖို့သူတို့အခွအေနမြေိုးအလွန်ရှည်လျားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ကိုပြင်ဆင်ရမည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော ဒူဘိုင်းကူညီပေးနေနိုင်ငံခြားသားများအတွက်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများအလုပ်ခံရ။ ပထမတော့ထို့နောက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းတစ်ပရိုဖိုင်းအစီရင်ခံစာတည်ထောင်။ နှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအားမရရေရှည်မှာအတွက်။ ဒါဟာသူတို့ကိုငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းချောမွေ့စေရန်ကူညီပေးပါမည်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်အချိန်ကြာပါလိမ့်မယ်။ ယူအေအီးအတွက် head-မုဆိုး ကြိုးစားနေသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူကိုဖြတ်ပြီးလာ တစ်ခုခြွင်းချက်ဇာတ်ကောင်ကိုရှာဖွေ.
ဤအချက်များပေးထား ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီများအတွက်စုဆောင်းမှုအေးဂျင့် ကြိုးစားနေ HR မန်နေဂျာများကပေးသောတစ်ဦးအခန်းအလွတ်ဖြည့်ဖို့ တိကျတဲ့ကုမ္ပဏီအတွင်း။ သို့သော်ထိုသို့ပြုမှလွယ်ကူသောအရာမဟုတ်ပါတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူတစ်ဦးအနေအထားတွေ့ရှိရန်။ တစ်စုံတစ်ဦးက၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ထမ်းရှာဖွေသူငှါးပြီသော်လည်း။ လစာပုံမှန်အားဖြင့်ကော်မရှင်အပေါ်သို့ပေးဆောင်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါကြောင့်ဦးခေါင်းမုဆိုးထောက်ပြ ကတိကဝတ် ASAP သင်ထားပါရန်ဖြစ်ပါသည်။
အပြုသဘောဘက်ခြမ်းတွင်အများအပြား schoolhouse, အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ယူအေအီးအတွက်တက္ကသိုလ်များဆိုတာကိုသတိရ။ တကယ်တော့သူတို့ထဲကအတော်များများဝင်စား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကူအညီများန်ဆောင်မှုများ။ တဦးတယောက်တည်းအရာများအတွက်, သူတို့သိသိသာသာအနေနဲ့လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဗားရှင်းမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တည်ထောင်ရန်အသစ်ကဘွဲ့ရကူညီပေးနေ။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင် , အထူးကုငှားရမ်း တဦးတည်းနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကသူတို့ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေမှုများကိုအတူအခြားကျောင်းသားများနှင့်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများကိုကူညီ။ ဒါကြောင့်အိပ်မက်ကိုရှာဖွေ အလုပ်အကိုင် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ 2019.
ယူအေအီးအတွက်ထိပ်တန်း rated ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီများနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်မည်
အခြိနျမှနျမှယာယီအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုအကြမ်းခံအမြဲတမ်းရာထူးများအတွက်ကောင်းသောဦးတည်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သည်မည်သည့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူယာယီအလုပ်ဆိုတော့စက်မှုလုပ်ငန်းထဲကကျန်ကြွင်းလျှင်အပြင်, တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ပါကစ္စတန်များအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း. ဒူဘိုင်းမြို့ ကုမ္ပဏီအနာဂတျကိုနောက်ဆက်တွဲဖုန်းခေါ်အသုံးဝင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်အတူသင်တို့သည်။ မရေမတွက်နိုင်သောကျောင်းအပ်အေဂျင်စီများယာယီသို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့ရာထူးတည်နေရာနှင့်အတူကူညီနိုင်ပြီး အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်စာချုပ်အလုပ်.
Intern များကိုတစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာများမှာ ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားရွေးချယ်မှု ယူအေအီး၌တည်၏။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ပဲတစ်ကောလိပ်ကျောင်းသားကနေဘွဲ့ရဘို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်တဦးတည်း Intern များကိုယူကရကျိုးနပ်သည် ?. တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စကြောင့်မှသံသယမရှိထိုက်သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာမဆိုအတွေ့အကြုံသစ်ကိုတိုးမြှင့် မည်သည့်အနေအထား၌တည်၏။ ထိုကဲ့သို့သောယာယီအဖြစ်နှင့်မကြာခဏကျောင်းများနှင့်ပုဂ္ဂလိကအလုပ်နေရာချထားန်ဆောင်မှုများ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်နှင့်နေထိုင်ခွင့် ကုမ္ပဏီများသည်အခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူဘွဲ့ကြိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျရှေ့ကိုခြေလှမ်းကိုယူသင့်ကြောင်းကိုလည်းအလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မယ့်ကြီးမြတ်လမ်းဖွစျလိမျ့မညျ ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်။ တူညီမှာ, သင်ရုံစျေးကြီးစက်မှုလုပ်ငန်းကွန်နက်ရှင်ရရှိမှုများအတွက်မည်သည့်အချိန်တွင်အလုပ်လုပ်စတင်နိုင်ပါသည်။ ပိုပြီးအကြံဉာဏ်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျ,fဖို့ကြိုးစားမှစစ်ဆေးသင့်သင့်ရဲ့အိပ်မက် ind ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ.
ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်ဂျော့ဘ်နှင့်တစ်မူထူးခြားသောလမ်းအတွက်ကြိုးပမ်း
ကွဲပြားခြားနားလက်ရှိအလုပ်ဈေးကွက်ကထားရန်မည်သည့်အလုပ်ရှာဖွေသူတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများတချို့၏အာရုံကိုဖမ်းယူပိုဖန်တီးမှုနည်းလမ်းများအဘို့အအကျိုးရှိသောပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြ အင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှင်များ။ နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်ကြော်ငြာနှင့်စုဆောင်းမှုပျဉ်ပြားဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်သင့်ရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita နှင့်အတ္ထုပ္ပတ္တိတစ်ဦးမိတ္တူနှင့်အတူတိုးတက်မှုအက္ခရာများပူးတွဲရပါမည်။
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းဖြန့်ဖြူးအဲဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာ, အလွန်အရေးပါလာ။ ဤအကြောင်းကြောင့်ပင်လန်ဒန်မြို့ရှိအချို့သောလူတွေကကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတော်ကြာဗားရှင်းကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ လူသားတစ်ဦး Billboard အဖြစ်လန်ဒန်မြို့ပတ်ပတ်လည်အထွေထွေအများပြည်သူနှင့်မတ်လမှကိုယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက်ပေးရန်။ အထက်ပြထားတဲ့အတိုင်းရုံယန္တရားတစ်ဦးချင်းစီ၏အချို့တို့ကမှတ်ချက်ချရမှဆင်းသွားကြပြီဖြစ်ကြောင်း ဒူဘိုင်းအတွက်အလားအလာအလုပ်ရှင်များ.
ဤအမှုနည်းလမ်းများအမှန်တကယ်လုပ်နိုင်ထို့အပြင်အယ်လ်တူညီတဲ့ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌သင်တို့၏မိသားစုနှင့်အတူအလုပ်စတင်ရန်သင်ကူညီ။ သငျသညျနိုင်ငံတကာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာတူညီတဲ့လမ်းများတွင်စောင့်ရလိမ့်မည်။ သင်ပင်နှင့်အတူ coupled ရှာဖွေစုဆောင်း၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားတက်ကောက်စေခြင်းငှါ ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှု ကာတာနိုင်ငံသို့မဟုတ်ဆော်ဒီအာရေဗျ၌တည်၏။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျမြားကိုလညျးမှားသတင်းအချက်အလက်ကျော်လက်ဖြစ်နိုင်သည်။
တောင်မှအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးသော်လည်း မဆိုရရှိနိုင်လမ်းအတွက်ဖန်တီးမှုနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုရန် operating။ ထိုလက္ခဏာသက်သေအသုံးပြုပုံကိုသင်ဒူဘိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများနှင့်အခြားလျှောက်ထားသူ၏လူအစုအဝေးထဲကနေထွက်မတ်တပ်ရပ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကြောင်းသင့်လျော်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်သေချာစေပါ။ သင်အမြဲသင်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်အတွက်ဖြစ်နိုငျသောကွောငျ့ နယူးအလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်း။ တဖန်သင်တို့ရန်ကြိုးစားနေနေဖော်ပြခြင်းမ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာထူးချွန်အလုပ်အကိုင်အကွံဉာဏျမြားတှေ့ရှိ.
မဟုတ်ကြီးကြပ်အနည်းငယ်အခြားသူတွေလုပ်ပါ ဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏အိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်း expanse မှအစွန်းရောက်ချဉ်းကပ်.
ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက် The Bottom Line
Correspondingly ဒူဘိုင်း 2019 နှင့် 2020 အတွက်ဂျော့ဘ်သည်။ ခေတ်မီအရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်ဖြစ်လာ မြင့်မားသောကတိကဝတ်များနှင့်အပြည့်အဝထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ဖြစ်လာသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဘယ်သူမျှအာမခံချက်သို့မဟုတ်အာမခံချက်လည်းမရှိ အလွန်အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ။ အထောက်အထားများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလက်မှတ်မကြာခဏအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနည်းလမ်းများပေါင်းစပ်အပေါ်မူတည်နေသည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်၏အသက်ကိုကြိုးပမ်းမှုတစ်ဦးအတွက်သွားဘာ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေရေး တစ်မူထူးခြားသောလမ်းအခါတိုင်း၌တည်၏။ တသမတ်တည်းထိရောက်သောနည်းလမ်းများနည်းလမ်းများအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြောင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအတွက်စောင့်ရှောက်လော့။ တဖန်ဒူဘိုင်းအများအပြားရရှိနိုင်အလုပ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေများအတွက်.
အဖြစ်မှန်မှာတော့အတူအကောင်းဆုံးထိပ်ဆုံး rated ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အတွင်ကျယ်စွာအနည်းငယ်အခြားသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကိုတဦးတည်းသင်ကူညီနိုင်မည်မဟုတ်ပါသော်လည်းထိုသူတို့အအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိသည်။ သို့သော်အပြုသဘောဘက်မှာထွက်ထောက်ပြဖို့နှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့စိုးရိမ်ခြင်းမရှိကြ ဒူဘိုင်းအတွက်အသစ်တခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေဘို့နည်းစနစ်များအမျိုးမျိုး.
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အင်တာနက်ကို Google ကဂျော့ & များအတွက်သော့ချက် မိုက်ကရိုဆော့ဖမှာအလုပ်အကိုင်များ။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှာတော့ဖြစ်လာ ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်အမုဆိုးများအတွက်အကောင်းဆုံး tool ကို.
* အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ပါ။ CV ကိုကူးယူပြီးကူးယူနိုင်ပါသည်။
မိမိကိုယ်ကိုမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်မိတ်ဆက်ပါ။ သင်သည် CV ကိုဒီမှာထည့်နိုင်သည်။ - (Ctrl + C, Ctrl + V)*
WhatsApp ကြော်ငြာခေါင်းစဉ် & WhatsApp နံပါတ်*